Ixesha leenqwelo zokuthenga eziSmart | UDuoduo
Ngokuphuculwa kwetekhnoloji yobukrelekrele bokuzenzela kunye notshintsho olutsha kumzi mveliso weentengiso, iinkampani ezininzi seziqalisile ukuphuhlisa okanye ukusebenzisa iinqwelo zokuthenga ezi-smart. Nangona inqwelo yokuthenga ehlakaniphileyo inezibonelelo ezininzi zesicelo, ikwafuna ukuthathela ingqalelo imfihlo kunye neminye imiba.
Kwiminyaka yakutshanje, ubuchwepheshe bolwazi lwesizukulwana esitsha njengobukrelekrele bokufakelwa kunye ne-Intanethi yezinto zikhule ngokukhawuleza, kwaye iifomathi zoqoqosho ezintsha ezinje nge-e-yorhwebo ziqhubekile nokukhula, ziqhuba utshintsho kumashishini amaninzi. Ngoku, ukuze uqhubeke notshintsho olutsha kwintengiso kunye nokubonelela ngeenkonzo ezingcono kubathengi, iinkampani ezininzi sele ziqalisile ukusebenzisa ukufunda okunzulu, i-biometric, umbono womatshini, iisenzi kunye nezinye iitekhnoloji ukuphuhlisa iinqwelo zokuthenga ezi-smart.
Walmart kwinqwelo othengela kuyo
Njengomthengisi omkhulu wehlabathi, uWal-Mart unamathela ekubalulekeni ekukhuthazeni ukuphuculwa kwenkonzo kusetyenziswa itekhnoloji. Kwangoko, iWalmart ifake isicelo selungelo elilodwa lomenzi wenqwelo yokuthenga smart. Ngokutsho kwelungelo elilodwa lomenzi wechiza, iWalmart Smart Shopping Cart inokujonga ukubetha kwentliziyo yomthengi kunye nobushushu bomzimba ngexesha lokwenyani, kunye namandla okubamba isiphatho esinqamlezileyo senqwelo yokuthenga, ixesha lokubamba kwangaphambili, kunye nesantya se inqwelo yokuthenga.
UWal-Mart ukholelwa ukuba yakuba nje inqwelo yokuthenga ithe yasetyenziswa, iya kuzisa amava angcono enkonzo kubathengi. Umzekelo, ngokusekwe kulwazi lwengxelo oluvela kwinqwelo yokuthenga eyi-smart, iWal-Mart ingathumela abasebenzi ukuba bancede abantu abadala okanye abaguli abanokuba sengxakini. Ukongeza, inqwelo yokuthenga inokuqhagamshelwa kwi-APP ekrelekrele yokulandela ikhalori kunye nenye idatha yezempilo.
Okwangoku, inqwelo yokuthenga eyiVolvo isekwinqanaba lobunikazi. Ukuba ingena kwintengiso kwixa elizayo, kulindeleke ukuba izise izibonelelo kwishishini layo lokuthengisa. Nangona kunjalo, abangaphakathi kumzi-mveliso bathi inqwelo yokuthenga smart ifuna ukuqokelela idatha eninzi, enokuthi ikhokelele ekuchazeni ubumfihlo ngokungeyomfuneko, emva koko ulwazi lokhuselo lolwazi kufuneka lwenziwe.
Ivenkile Yeevenkile eNtsha yeVenkile yokuThenga
Ukongeza kwi-Wal-Mart, i-E-Mart, ikhonkco elikhulu lesaphulelo eliphethwe ngumthengisi waseMzantsi Korea kwiVenkile yeSebe leHlabathi liphela, ikhuphe inqwelo yokuthenga e-smart, eya kuthi iqale ukusebenza kwetyala kwilixa elizayo ukukhuthaza ukhuphiswano lwenkampani ngaphandle kweintanethi amajelo osasazo.
Ngokuka-E-Mart, inqwelo yokuthenga smart ibizwa ngokuba yi "eli", kwaye ezimbini zazo ziya kuthunyelwa kwivenkile enesitayile esigcina mpuma eSeoul kumboniso weentsuku ezine. Ngoncedo lwenkqubo yokwamkelwa, inqwelo yokuthenga ekrelekrele inokulandela ngokuzenzekelayo abathengi kwaye ibancede bakhethe iimveliso. Kwangelo xesha, abathengi banokuhlawula ngokuthe ngqo ngekhadi lokuthenga ngetyala okanye ngentlawulo yokuhamba, kwaye inqwelo yokuthenga enobuchule inokumisela ngokuzimeleyo ukuba ngaba zonke iimpahla zihlawulwe.
Inqwelo yokuThenga e-Super Hi Smart
Ngokungafaniyo noWal-Mart kunye neVenkile yeSebe leHlabathi elitsha, uChao Hei yinkampani yophando kunye nophuhliso yokuphucula iinqwelo zokuthenga. Kuxelwe ukuba inqwelo yokuthenga eyiSuper Hi, egxile ekuzinzeni ngokwazo, isebenzisa itekhnoloji enje ngombono womatshini, iisenzi, kunye nokufunda okunzulu ukunceda ukusombulula ingxaki yemigca emide kwivenkile.
Inkampani ithi okwangoku, emva kweminyaka eliqela yophando kunye nophuhliso kunye nokwenza, inqwelo yayo yokuthenga enobuchule sele inokwamkela i-100,000 + SKU kwaye yenze ukukhuthazwa okukhulu. Okwangoku, iSuper Hi Smart Shopping Cart iye yasungulwa kwiivenkile ezinkulu zaseWumart eBeijing, kwaye ineeprojekthi zokufika eShaanxi, eHenan, eSichuan nakwezinye iindawo naseJapan.
Iinqwelo zokuthenga ezi-Smart zi Kakhulu
Ewe, ayizizo ezi nkampani kuphela ezenza iinqwelo zokuthenga ezi-smart. Iqhutywa kukunyuka kobukrelekrele bokuzenzela kunye nentengiso entsha, kulindeleke ukuba iivenkile ezininzi kunye neendawo ezinkulu zokuthenga zizise iimveliso zeenqwelo zokuthenga kwi-smart kwixa elizayo, ngaloo ndlela kukhawuleziswe ukufezekiswa kwentengiso, ukuloba olu lwandle luluhlaza okwesibhakabhaka, kunye nokudala enkulu enkulu kwimarike.
Kwiinkampani zentengiso, ukusetyenziswa kweenqwelo zokuthenga eziqinisekileyo kuya kuba sisibonelelo esihle. Okokuqala, inqwelo yokuthenga enobuqili ngokwayo yinto elungileyo yokwazisa enokuthi izise izabelo zentengiso kwinkampani; Okwesibini, inqwelo yokuthenga enobuhlakani inokuzisa abathengi amava amatsha okuthenga kunye nokwandisa i-viscosity yomsebenzisi; kwakhona, inqwelo yokuthenga enobuhlakani inokufumana isitshixo esikhulu seshishini Idatha elungele ukudibanisa izixhobo ezahlukeneyo, ukunciphisa iindleko zokusebenza, kunye nokunyusa inzuzo yorhwebo. Okokugqibela, inqwelo yokuthenga enobuhlakani inokusetyenziswa njengeqonga lentengiso, elinokuthi linxibelelane kuphela ngokusondeleyo kunye nabathengi, kodwa lizise ingeniso ethe kratya kumashishini.
Lilonke, uphando kunye nophuhliso lweenqwelo zokuthenga ezi-smart sele zikhule ngakumbi, kwaye kulindeleke ukuba nesicelo esikhulu semakethi. Mhlawumbi ayizukuthatha ixesha elide ukuba sihlangane neenqwelomoya ezithengayo kwiivenkile ezinkulu nakwiivenkile ezinkulu, kwaye ke siya kuba nakho ukufumana amava okuthenga.